सलमान र शाहरुखमा नम्बर वान को ? - Narayanionline.com
वाइसीएल बागमती प्रदेश सह–संयोजकमा पनेरु, चितवन इन्चार्जमा अधिकारी
सलमान र शाहरुखमा नम्बर वान को ?
बलिउडका दुई सुपरस्टार शाहरुख खान र सलमान खानबीच कहिले सम्बन्ध सुध्रिएको त कहिले विग्रिएका खबरहरु आइरहेका हुन्छन् । अहिले भने यी दुईको मित्रता उदाहरण दिन योग्य छ ।
यस्तैमा एक प्रश्न वर्षैदेखि सबैको दिमागमा आइरहेको छ, यी दुईमा नम्बर वान को हो ? कसको फ्यान फलोइंग सबैभन्दा धेरै छ ? फिल्म र सोसल मिडियामा यी दुई सुपरस्टारमा को अगाडि छन् भन्ने कुरा आज हामी यो प्याकेजमा चर्चा गर्दैछौं ।
बक्सअफिसमा अगाडि निस्किए सलमान
फिल्मको कुरा गर्ने हो भने बक्सअफिसमा सलमान खानकै वर्चश्व छ । हरेक वर्ष उनको एक ब्लकबस्टर फिल्म आएकै हुन्छ । २०१० मा आएको ‘दबंग’ मा चुलबुल पाण्डेको भूमिका निर्वाहा गरेर उनले यो साबित गरेका थिए कि, उनी बक्सअफिसका ‘किंग’ हुन् ।
२०११ मा आएको ‘रेडी’ र ‘बडिगार्ड’ पनि दर्शकलाई औधी मन पर्‍यो । २०१२ मा आएको फिल्म ‘एक था टाइगर’ उनका लागि माइलस्टोन साबित भयो । यस फिल्मले जर्बजस्त कलेक्सन गरेको थियो । सोही वर्ष ‘दबंग २’ पनि आयो । यो पनि सुपरहिट फिल्मको लिस्टमा सामेल भयो ।
वर्ष २०१३ उनका लागि खासै राम्रो रहेन तर २०१४ मा आएको फिल्म ‘किक’ ले बक्सअफिसमा धूम मच्चायो । फेरि २०१५ मा ‘बजरंगी भाईजान’, २०१६ मा ‘सुल्तान’ र २०१७ मा ‘टाइगर जिन्दा हे’ ले उनलाई सुपरस्टारको क्याटेगरीमा उभ्यायो । उनका फिल्मले भारतमा मात्र नभएर विश्वभर दमदार कलेक्सन गर्ने गरेका छन् ।
२०१३ पछि शाहरुखको चम्किएन स्टारडम
शाहरुखले २०१३ पछि कुनै सुपरहिट फिल्म दिएका छैनन् । २०१३ मा आएको ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ लाई दर्शकले निकै रुचाए, तर यसपछि आएका ‘ह्याप्पी न्यू ईयर’, ‘दिलवाले’, ‘फ्यान’, ‘रईस’, ‘जीरो’ र ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ दर्शकको विश्वासमाथी खरो उत्रन सकेनन् ।
बक्सअफिसको नजिता हेर्ने हो भने शाहरुखभन्दा सलमान धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । अहिले सलमानलाई बक्सअफिसको ‘सुल्तान’ भन्ने गरिन्छ ।
सोसल मिडियामा पनि अगाडि सलमान
सोसल मिडियामा फ्यान फलोइंगको कुरा गर्ने हो भने यहाँ पनि सलमान, शाहरुखभन्दा अगाडि निस्किएका छन् । फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममध्ये दुई प्लेटफर्ममा सलमानको फ्यान फलोइंग शाहरुखको भन्दा धेरै छ ।
फेसबुकमा सलमानलाई साढे ३ करोडभन्दा बढी व्यक्तिले फलो गर्ने गर्दछन् । शाहरुखको फ्यान फलोइंग ३ करोडको आसपास छ । यस्तै, सलमानलाई इन्स्टाग्राममा २ करोड २२ लाख बढीले फलो गरेका छन् । त्यही, शाहरुखलाई इन्स्टाग्राममा १ करोड ७० लाख बढीले फलो गर्ने गर्दछन् ।
तर, ट्विटरमा भने सलमानभन्दा शाहरुख अगाडि छन् । यहाँ शाहरुखको फ्यान फलोइंग ३ करोड ८० लाखभन्दा बढी छ । यस्तै, सलमानलाई ट्विटरमा ३ करोड ६७ लाखभन्दा बढीले फलो गरेका छन् ।
आजदेखि बन्द भयो मुन्द्रेको कमेडी क्लब
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले गरे दोस्रो विवाह (फोटो फिचर)
साथीहरुसंग स्विमिङ पूलमा गर्भवती प्रियंका (तस्विर)
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी भोलि नेपाल आउँदै
ए मेरो हजुर ३ को सक्सेस पार्टीमा के के भयो ?
पूर्वी चितवनका चार नगरपालिकाका जनतालाई सेवा दिने बकुलहर अस्पताल प्रदेश स्तरको हुने
सीपीएलमा सन्दीपको उत्कृष्ट बलिङ, टिम भने पराजित
बजेटः साउनदेखि प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध
आमाको मुख हेर्ने पर्व : आमाप्रति श्रद्धाअर्पण गरी आशिर्वाद लिइँदै
जनतामा बेचैन बढ्ने खतरा छ, अब एक्सनमा काम गरौंः प्रचण्ड